Mpiasa sy mpampiasa ary sendikalista miisa 100 omen’ny Cnaps fiofanana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Tsy mahalala zo. Mpanararaotra. Mbola maro ny mpiasa eto Madagasikara tsy mahafantatra ny zony eo amin’ny lafiny sosialy, misy koa ny mpampiasa manararaotra ny tsy fahalalan’ny mpiasa izany zony izany ka tsy manefa ny adidy manandrify azy ireo amin’izany, tsy miraharaha fotsiny izao ny zo ara-tsosialin’ny mpiasa eo ambany fiadidiany. Mety noho ny fiheveran’izy ireo fa vesatra mampiakatra ny fandaniana ny lafiny sosialy no mahatonga izany ka nefa eo ihany koa ny tsy fankasitrahan’ny mpiasa sasany izany ary noho ny tsy fisian’ny asa firy, tsy fahampian’ny tolotr’asa, dia sitrany ahay, ka tsy mihevitra ny hitaky ny zony ara-tsosialy akory ny mpiasa sasany. Zara aza fa mahita asa. Izany rehetra izany no mitranga eo amin’ny tontolon’ny asa, araka ny nambaran’ny mpanolotsaina manokan’ny Tale Jeneralin’ny Cnaps, Rakotomanana nandritra ny lahateny nataony ho fanokafana amin’ny fomba ofisialy ny fanofanana momba ny fiahiana ara-tsosialin’ny mpiasa eny anivon’ny orinasa tsy miankina na ny vondrombahoakam-paritra na koa ny sehatra samihafa mampiasa Ecd. Fiofanana izay hotanterahina mandritry ny telo andro etsy amin’ny foiben’ny Tahirimpirenena Ampefiloha, ka hahafantaran’ireo mpiasa sy mpampiasa ary sendikalista misimisy kokoa ny momba ny Cnaps sy ny asa iandraiketan’ity Tahirim-pirenena ity ary ny zo sy adidy aman’andraikitry ny mpiasa sy ny mpampiasa mikasika hatrany ny lafiny sosialy.
Nanafatra araka izany ingahy mpanolotsaina manokana, fa hanana andraikitra amin’ny fampahafantarana ny zavatra nanofanana azy ireo ireto mpiofana ireto aorian’izao fiofanana izao, ka ho masoivohon’ny Cnaps any amin’ny toeram-piasana iandraiketan’izy ireo any avy. Adidin’ny mpampiasa ny mamita ny adidiny amin’ny zo ara-tsosialin’ny mpiasa iandraiketany. Faniriany araka izany ny tsy hisian’ny mpiasa very zo intsony rahatrizay ka handao ny toeram-piasany noho ny fahanterany ka tokony hisotroany ronono amin’izay. Satria raha tsy voaloa ara-dalàna teny anivon’ny Tahirim-pirenena tokoa izay latsakemboka izay nandritry ny taom-pahatanorana nanatanterahana ny asa, miala maina rehefa tonga ny taom-bolofotsy ary dia very ny zo tokony hisitrahana. Tahaka izany koa ireo zo sy fanampiana tokony ho azo mandritra ny fotoana iasana, toy ny fanampiana ara-pianakaviana, dia ny volan-jaza sy ny volan’ny bevohoka ary ny mpitaiza kely. Ny fanampiana ho an’ireo marary am-perin’asa na tra-doza ka nitondra takaitra ary ny fisotroan-dronono araka ny efa voalaza teo.
Nanomboka ny alarobia 3 mey ary nifarana ny zoma 5 mey moa ity fiofanana ity, ka mandritra izany no hahafantaran’ireo mpiofana misimisy kokoa izay zo sy adidin’ny mpiasa sy ny mpampiasa momba ny fiahiana ara-tsosialy izay. Satria ny fiahiana ara-tsosialy tsy miangatra tokoa dia andraikitry ny rehetra. Nanome voninahitra ity fotoam-panokafana omaly ity ireo tale samihafa eo anivon’ny Tahirim-pirenena notarihin’ny mpanolotsaina manokan’ny Tale Jeneraly, Rakotomanana izay nisolo tena an’Andriamatoa Rabekoto Arizaka Raoul, Tale Jeneralin’ny Tahirim-pirenena.
Fête nationale : Don de arendrina auprès des élèves de l’école adoptive d’Airtel Madagascar - il y a 6 heures
FLM : Deux synodes régionaux formés par la CNaPS en matière de protection sociale - il y a 3 jours